Ra'isal wasaare Rooble wuxuu booqday Injineerada & askartii.
Ra’isal wasaare Rooble wuxuu booqday Injineerada & askartii.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay xilli dambe gaaray Isbitaalka Digfeer halkaas oo lagu dabiibayo dhaawacyo ka soo gaaray injineero Turki ah iyo askarta dowladda.
Injineerada & Askarta waxaa la dajiyeen qeyb gaar ah oo ka mid ah isbitaalka si loogu daweeyo dhaawacyada kasoo gaaray firirka qaraxa uu ku weeraray qofka isku soo xiray Walxaha qarxa waxaa xalay u tagay R / wasaaraha XFS, Xubnaha xafiiska Ciidanka haramacad.
Rooble ayaa caafimaad wanaagsan u rajeeyay Injineerada iyo ciidamada isku xilqaamay ammaankooda, maadaama uu tilmaamay inay ka qeyb qaadanayaan dib u dhiska dalka.
“Argagixisadu waxay kasoo horjeedaan nabada iyo horumarka dalkeena, laakiin xaqiiqda ah in weeraradooda fuleynimo aysan marnaba ka hor istaagi doonin dadka iyo dowlada Soomaaliya dib u dhiska iyo horumarinta dalka.” Sidaana waxaa yiri R / wasaaraha XFS oo hadal kooban ka jeediyay booqashada bukaanada.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan waligeed joojin doonin dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, taasoo ay ku nafwaayen injineero Turki ah, dad shacab ah iyo askarta dowladda.
Dhismuhu wuxuu hada udhaxeeyaa Xaawo Cabdi iyo Lafoole waana goobtii shalay lagu qarxiyay injineero Turki ah oo kaqeyb qaatay dib udhiska wado 30km ah oo muhiim u ah isku socodka gaadiidka isaga kala goosha gobolada Banaadir iyo Sh / hoose.
the opposition disputes the formulation of drafting
Mahamane Ousmane-Mohamed Bazoum, two teenagers of